MFASetup - माइक्रोसॉफ्ट मल्टी फैक्टर प्रमाणीकरण गाइड - कसरी
हामी यस्तो दुनियामा बाँचिरहेका छौं जुन डिजिटल आयाममा लगातार विस्तार हुँदै जान्छ। आज हामीसँग हाम्रो सबै डाटा अनलाइन छन्। स्मार्ट उपकरणहरू र क्लाउड कम्प्युटि .को सहजताको लागि सबै धन्यवाद छ जुन हाम्रो सम्पूर्ण विश्व इन्टरनेटको वरिपरि घुम्छ। जबकि इन्टरनेटले हामीलाई धेरै फाइदाहरू ल्याउँछ, यसमा त्यस्तै खतरनाक सुरक्षा समस्याहरू छन्।
त्यहाँ धेरै धेरै ह्याकरहरू वा व्यक्ति हानि गर्न खोज्दै छन्। सुरक्षा उल्ल .्घन वा ह्याकिckingको कारण अनगिन्ती छ। यो तपाईंलाई ह्याक गर्न र तपाईंको सबै विवरणहरू लिनको लागि हुन सक्छ। गुगल बाहेक, माइक्रोसफ्ट सब भन्दा प्रचलित प्लेटफर्म हो, विश्वभरका सबैले प्रयोग गर्छन्।
हामी सबैसँग एक माइक्रोसफ्ट आईडी छ र हाम्रा पीसीहरू मुख्य रूपले यसलाई प्रयोग गर्दछन्, विशेष गरी यदि हामीसँग विन्डोज १० छ भने तपाइँको सुरक्षा सुदृढीकरण गर्न, माइक्रोसफ्टले मल्टि-फक्टर प्रमाणीकरण प्रस्तुत गर्‍यो। यस गाईडको उद्देश्य तपाईलाई प्रोग्रामको बारेमा सबै कुरा जान्न, यसलाई सक्रिय गर्न र कसरी उपयोगी छ भन्ने बारे मद्दत पुर्‍याउनु हो। त्यसो भए थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं!
MFASetup के हो?
मल्टि-फेक्टर प्रमाणीकरण सुविधा Microsoft द्वारा तपाईंको पहिचान र प्लेटफर्ममा पहुँच सुदृढीकरण गर्न को लागी एक प्रयास हो। यो मुख्य रूप मा तपाईं एक नयाँ उपकरणबाट वा वेब ब्राउजर मार्फत जब तपाईं लगइन गर्न को लागी सोध्छ। बहु-कारक प्रमाणीकरण Google द्वारा प्रमुखताका साथ प्रयोग गरीन्छ, र इन्टरनेटमा प्रायः सबै सेवाहरू बिस्तारै यसलाई समावेश गर्दैछ। क्लाउड प्लेटफर्महरूमा केही घटनाहरू पछि यो विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण भएको छ, जस्तै 'क्लाउड इन द क्लाउड'।
अधिक Minecraft माइक्रोसफ्ट गाइड:
सेट अप Xbox मा .af.ms/xboxsetup को साथ प्रयोग गरी
Aka.ms/remoteconnect त्रुटि ठीक गर्नुहोस्
बादलमा मानिस के हो?
एमआईटीसीको रूपमा पनि परिचित, यो परिचयपत्र बिना आईडीमा उनीहरूको पहुँच गुमाउने एक ह्याकि attempt प्रयास हो। आक्रमणकर्तालाई पीसी मार्फत एकल-चरण पहुँच आवश्यक छ। यदि तपाईंसँग गुगल, फेसबुक, वा कुनै अन्य वेबसाइट जस्तो कुनै प्लेटफर्ममा एकल सुरक्षा छ भने, आक्रमणकर्ता सजिलै यसलाई भंग गर्न र प्रविष्ट गर्न सक्दछ।
तसर्थ, बहु-प्रमाणिकरण प्रमाणीकरणले एकको सट्टामा दुई चरण प्रमाणिकरण प्रयोग गर्दछ तपाई आईडीको मालिक हुनुहुन्छ भनेर लगइन गरिरहेको छ। तसर्थ, यसले सुरक्षा बढाउँदछ, र यस कुशल विधि मार्फत, एमआईटीसी अत्यधिक असम्भव हुन्छ। अवश्य पनि, MF ले तपाईंलाई ल्याउने यो एक मात्र लाभ छैन। यसले तपाईंको समग्र सुरक्षालाई थप मजबुत गर्दछ।
कसरी मल्टि-फैक्टर प्रमाणीकरण काम गर्दछ?
त्यहाँ तीन विधिहरू छन् जुन ती मार्फत काम गर्दछ र राम्रो सुरक्षा प्रदान गर्दछ। जहाँसम्म, प्रत्येक विधिले केहिलाई जोड्दछ जुन तपाईंलाई थाहा भएको केहिसँग मिल्दछ। उदाहरण को लागी, तपाइँ तपाइँको लगईन आईडी र पासवर्ड थाहा छ, र तपाइँ संग एक समय-पासवर्ड पठाउन एक दर्ता फोन नम्बर छ। अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागि पढ्नुहोस्:
यस विधिले तपाइँको Microsoft खातासँग सम्बन्धित दर्ता वा सम्बन्धित मोबाइल नम्बर प्रयोग गरेर ठीक काम गर्दछ। एकचोटि तपाईंले यो विधि सक्रिय गर्नुभयो, जब तपाईं नयाँ उपकरण वा ब्राउजरबाट लग इन गर्नुहुनेछ, तपाईंले एसएमएस वा कल मार्फत प्रमाणिकरण कोड (एक-समय पासवर्ड) पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई लगइन गर्न अनुमति दिनेछ।
यसलाई कसरी सक्रिय गर्ने?
भ्रमण गर्नुहोस् https://aka.ms/MFASetup
यसले तपाईलाई लग इन गर्न, अनुवर्ती मार्फत सोध्नेछ
यसले तपाइँलाई प्रमाणीकरण विधि सोध्छ, फोन प्रमाणीकरण चयन गर्नुहोस्
त्यसपछि तपाईंको देश र मोबाइल नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस्
त्यहाँ पाठ सन्देश मार्फत कोड प्राप्त गर्न एक विकल्प हुनेछ
अर्को थिचेर, यसले तपाईंलाई नम्बरमा ओटीपी पठाएर नम्बर पुष्टि गर्न सोध्नेछ
कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्, र तपाइँ जानु राम्रो छ
यस विधिले तपाईंलाई तपाईंको अनुप्रयोग आईडीको लागि लगइन क्लियरन्स प्रदान गर्न प्रयोग गर्न अनुमति दिँदछ। यो सामान्यतया एक पुश बटन हुन्छ जसले तपाईंलाई लग ईन गर्न कोशिस गर्दैछ कि भनेर सोध्दछ। यदि तपाईंले प्रमाणित गर्नुभयो भने, आईडी लग इन गर्न क्लीयरन्स प्राप्त हुनेछ। यस चरणमा तपाईंसँग आधिकारिक माइक्रोसफ्ट प्रमाणीकरण अनुप्रयोगको साथ स्मार्टफोन वा ट्याब्लेट हुनु आवश्यक छ।
कसरी सक्रिय गर्ने?
सेटअप वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस्
यस पटक विकल्पबाट मोबाइल अनुप्रयोग चयन गर्नुहोस्
त्यसपछि सूचना प्राप्त गर्न विकल्प चयन गर्नुहोस्
एक नयाँ सेट अप बटन QR कोडको साथ देखा पर्नेछ
अब तपाईंले आफ्नो स्मार्टफोन वा ट्याब्लेटमा प्ले स्टोरबाट आधिकारिक माइक्रोसॉफ्ट प्रमाणक डाउनलोड गर्नुपर्नेछ
त्यसपछि मानक प्रक्रिया अनुसरण गरेर अनुप्रयोगमा लग इन गर्नुहोस्
एकचोटि तपाईंले खाता थप गर्नुभयो भने, यसले QR कोड खोल्न क्यामेरा अनुमति लिनेछ
QR कोड पढ्नुहोस्, र तपाइँ जानु राम्रो छ
बाँकी प्रक्रिया स्वचालित छ
अनुप्रयोग खुला प्राधिकरण:
यस चरणले पुश-प्रमाणीकरण र प्रमाणिकरण कोड संयोजन गर्दछ। यसले पुश-प्रमाणीकरणको सक्रियता प्रक्रियालाई अनुसरण गर्दछ, तर यसले एक प्रमाणिकरण कोड प्रदर्शन गर्दछ। कोड हरेक seconds० सेकेन्डमा परिवर्तन हुन्छ, र यसलाई प्रयोग गर्नु राम्रो विचार हो यदि तपाईं सार्वजनिक नेटवर्कमा तपाईंको आईडी पहुँच गर्दै हुनुहुन्छ भने। वैकल्पिक रूपमा, यो राम्रो विकल्प हो यदि तपाईं गरीब नेटवर्क जडानको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने।
के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पनि छ?
हो, यो तपाइँलाई थाहा छ र तपाइँसँग छ भन्दा अलग तेस्रो तरिका हो। बायो-मेट्रिक कुनै पनि अनुप्रयोग वा वेबसाइट पहुँच गर्न एक सुरक्षित तरीका हो। धेरै स्मार्टफोन अनुप्रयोगहरूले तपाईलाई प्लेटफर्ममा द्रुत पहुँच प्रदान गर्न प्रयोग गर्दछ अनावश्यक रूपमा सबै समयमा प्रमाणीकरणको आवश्यकता बिना। यसले समय बचत गर्दछ किनकि यो सामान्यतया द्रुत विधि हो। यद्यपि जोखिम कम गर्नका लागि विभिन्न प्रकारका प्रमाणीकरण विकल्पहरू सक्रिय गर्न उत्तम हुन्छ।
तपाईले किन एमएफए एक्टिभेसन पाउनु पर्छ?
यदि तपाइँ महत्त्वपूर्ण कागजात भण्डारण र स्थानान्तरणको लागि प्राय: तपाइँको स्मार्टफोन वा कार्य आईडी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाइँले यस प्रक्रियालाई सक्रिय गर्नु पर्छ। त्यस्तै, धेरै संस्थाहरूले आफ्ना कामदारहरूको लागि बिभिन्न काम आईडी प्रदान गर्छन्, र यदि कर्मचारीहरूले यी बहु-प्रमाणिकृत प्रमाणिकरणहरू सक्रिय छैनन् भने, एक ह्याकरले सम्भाव्य रूपमा यसलाई उल्ल .्घन गर्न सक्दछ। व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताहरू कम जोखिममा छन्, तर यदि तपाईंसँग वित्तीय परिचयपत्रहरू (क्रेडिट कार्ड, बैंक प्रमाणीकरण, आदि) जस्तै विभिन्न प्रमाण-पत्रहरू छन् भने, यो तपाईंको लागि एमएफए रोजगार गर्न महत्वपूर्ण हुन्छ। एक बोनस को रूप मा, यसले सुरक्षा थप्न सक्छ तपाई संग अधिक मूल्य छैन भने पनि।
तपाइँलाई आफ्नो सुरक्षा बृद्धि गर्न मद्दतको लागि Microsoft को व्यावहारिक चरणहरूको बारेमा तपाइँलाई जान्नुपर्दछ। हामी आशा गर्दछौं कि यस लेखले कुनै श doubts्का स्पष्ट पार्दछ। MFAsetup सबैको लागि पहुँच हो, संगठन मात्र होईन। तसर्थ, सबैले यस शानदार प्रविधिको फाइदा लिनुपर्दछ।
थप रूपमा, यो उत्तम हुन्छ यदि तपाईंले MMA वा २-चरण प्रमाणिकरण अन्वेषण गर्नुहुन्छ अन्य अनुप्रयोगहरू र प्लेटफर्महरूको लागि तपाईंको सुरक्षालाई सुदृढीकरण गर्न। डिजिटल विश्व नाजुक छ, र एकल गल्तीले एक अथाह हानि निम्त्याउन सक्छ। उत्तम विधिहरू प्रयोग गर्नुहोस् र कुनै चीजको लागि सँधै विश्वसनीय र प्रमाणित स्रोतहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
Minecraft गर्न अधिक र्याम आबंटित गर्नका लागि गाईड
सर्वश्रेष्ठ Minecraft छाला विचार (२०२०)
कसरी आईफोन र आईप्याडमा क्याच खाली गर्ने - सफारी, अनुप्रयोगहरू
प्रति वर्ष अमेजन प्राइम विद्यार्थी लागत
रोबलोक्स खेलहरूले निःशुल्क लुक्स दिन्छ
mp3 कन्भर्टरमा अनलाइन m4a
अनलाइन वेबसाइटहरू हेर्न निःशुल्क फिल्महरू
आईप्याड अनलाइनको लागि खेलहरू अनब्लक
टम्ब्लर बाईपास सुरक्षित मोड खाता बिना